Author: Nekinos Kigasar
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Fe waa eray Amxaari ah oo u dhigma Madaxa, Tafari-na waa naaneys loo yaqaanay Xeyle Salaasi wixi ka horeeyay xiligii uu boqortooyada koray. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1.
Cidda qortay Dastuurka qabyo-qoraalka Soomaaliya loo diyaariyay. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.
Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha. Dowladaha hoose, ayaa waxay xaq u yeelan doonaan boqolkiiba 15 dhaqaalaha waddanka, waxay sidooo kale yeelan doonaan baarlamaan u gaar ah, iyadoo madaxweynuhuna uu awoodda la qeybsan doono baarlamaanka iyo aqalka senate-ka.
Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira. Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer.
Dastuurka Cksub kiiQod. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Waxaa loo dooran karaa xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda muwaaddin kastoo Soomaaliyeed, Muslim ah, aabihiis iyo hooyadiis Soomaali asal ah yihiin, horay an u gursan, inta uu xilka cusuub guursanin qof aan Soomaali asal ahayn.
Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa.
Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. About us Dastuurma Policy Contact Us.
Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Abril waxa qaba qareen kale oo Itoobiyaan ah, waxaana loo xilsaaray labadooda inay soo diyaariyaan dastuurka Soomaaliya ee ay kusoo qoreen, in guurka aan loo aqoonsan kaliya midka dhex mara nin iyo naag Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Waxaana cadaatay hada in lasoo bandhigay Dastuurkii runta ahaa ee ay qortay gabadha Jamayka u dhalatay iyo ninkeeda Itoobiyaanka ah, waxana hada la qorshaynayaa in Dastuurka Soomaaliya lagu daro in diinta Kirishtaanku ay ka mid tahay dastuurkka rasmiga ah ee Soomaaliya. Dadka rumaysan diinta Rastafari waxay aaminsan yihiin Xeyle Salaase inuu abuuri doono aduun cusub si uu wanaaga ugu hogaamiyo aduunka, waxayna u yaqaanaan aduunkaas Zion, caasimadda Zion waxay ku sheegeen inay ku taalo waqooyiga Itoobiya halka la yiraahdo Lalibela, waxayna ugu magac dareen Jurisalaamta Cusub.
Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkiisuna ku abtirsadaan dunida Carabta iyo Afrikaanka. Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Islaamku waa Diinta Dowladda. Fatuma Gedi breaks silence on fake sex tape as suspect arraigned in court December 28, Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Soomaaliya ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo.
Soomaalidu horay ugu maahmaahday “Hal booli ahi, nirig xalaal ah ma dhasho” Hadaba yaa dhalay dastuurka qabyo-qoraalka ah? Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta. Qodobka 4aad — Gobannimada Jamhuuriyadda 1. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud.
Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. somalis
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin e yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, dastuurkz in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed. Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood, Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka.
Sida ku xusan Cutubka tobnaad ee Dastuurka, maxkamad ayaa burin karta sharci kasta ama tallaabo maamul oo domalia soo horjeedda Dastuurka.
Rabshadahaasi, waxaa lagu soo afjaray heshiis awood qeybsi ah, oo ay wada gaareen Madaxweyne Kibaki iyo Raisal Wasaare Odinga. Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Dastuurka cusub, oo ay taageerayaan Madaxweynaha dalka Mwai Kibaki iyo Raisal Wasaaraha Raila Cuxub, ayaa waxaa uu si weyn wax uga badalayaa awoodda madaxweynaha, qaabka loo qeybsanayo kheyraadka domalia, waxaa uuna abuurayaa aqal cusub oo senate-ka iyo dowladdo hoose oo awoodooda la xoojiyey.
Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada. Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya.
Dastuurka Cusub: Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda
Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Madaxweynaha waxaa uu xilka la wareegay kii. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan.